Izixhobo zokuvavanya iMask abavelisi kunye nababoneleli - China iMask yokuVavanya izixhobo zeFektri
Izixhobo zokuvavanya iMask esitokisini, ukuhanjiswa okukhawulezayo, ukuthengiswa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso. Zonke zidibana ne-ASTM, BS EN, ISO, YY, GB kunye neminye imigangatho.
Nika isisombululo esimileyo.
Isigqumathelo somatshini woVavanyo lweNdawo yokuBonakalayo
Isicelo: Ukuchonga ukuba ingaba indawo yombono phantsi kwemaski iyahlangabezana na nemfuno esemgangathweni okanye hayi. Imigangatho: i-GB 2890 yokhuseleko lokuphefumla, uhlobo lokucoca ulwelo lwe-self-priming uhlobo lwe-6.8 GB / T ...
Ukhuseleko kwimask yokuvavanya ukuvavanya
Isicelo: Lo matshini wokuvavanywa kwemaski ukuvavanya inqanaba lokuvuza (i-TIL kunye ne-IL) yemaski, imaski yobuso epheleleyo, izixhobo zokuphefumla kunye nemaski yegesi. Umgaqo: Ukuvuthela ioyile okanye ityiwa ...
Imaski PM uKhuselo lweSiphumo sokuvavanya
Isicelo: Isetyenziselwa ukuvavanya ukusebenza kweemaski zokhuselo zemihla ngemihla kunye nezinye iintlobo zeemaski ngokuchasene nomba wento. Iyasebenza kwiziko lovavanyo lwezixhobo zonyango, ukhuseleko ...
Ukuvavanywa konyango olunxibileyo
Isicelo: Lo matshini kukulinganisa ukunxiba kwangaphambili ngaphambi kokuba umatshini wokuphefumla ube novavanyo lokumelana nokuphefumla okanye uvavanyo lokungena kwento yokuhluza. Umatshini wokuphefumla ...